Warshadda Toonta - Shiinaha Soosaarayaasha iyo Shirkadaha Toonta
Toonta madow, oo ka samaysan toon ceyriin ah oo cusub laguna khamiiriyey sanduuqa halsano leh maqaarka 90 ~ 120 maalmood, waxay leedahay saameyn wanaagsan antioxidant. Toonta madow waa nooc ka mid ah cuntada oo qof waliba yaqaan. Cunista toonta madow waxay u fiicnaan kartaa caafimaadka, gaar ahaan toonta madow waxaa loo isticmaali karaa inay gacan ka geysato horumarinta caafimaadka xididdada dhiigga. Toonta madow waa cunno aad u caafimaad qab oo aan lahayn waxyeellooyin. Sidaa darteed, dadku way nasan karaan markay cunayaan toonta madow, mana jiraan wax xaaraan ah oo ku saabsan isku duubnaanta.
Toontu waxay ka kooban tahay in ka badan 200 oo maado ah, oo waxtar u leh caafimaadka jirka iyo maskaxda, marka laga reebo borotiinka iyo fiitamiinnada, kaalshiyamka, birta, zinc iyo walxo kale oo ka kooban ayaa sidoo kale aad u tiro badan, nafaqada toonta waxay aad ugu dhowdahay quluubta dadka, laakiin dad badan ayaa laga yaabaa inaysan dareemin faa iidada caafimaadka jirka ee ka imaaneysa cunista toonta, toonta ceyriinka ah runti sidoo kale waxay leedahay qasaaro, sidoo kale waxaa jira siyaabo badan oo loo kariyo toonta.
Toon la qaboojiyey
Toonta si dhakhso leh loo qaboojiyey oo la ilaaliyey waa mid ka mid ah waxsoosaarka qotada dheeriga ah ee toonta. Iyada oo toonta ay tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee cayriin, waxaa si ballaaran u isticmaalay bulshada caalamka. Xaaladaha caadiga ah, soosaarka noocyadan toonta ee noocan ahi waxay u baahan yihiin kormeer alaab ceeriin ah, qoynin, diirid iyo in ka badan 10 tallaabo iyo habab.
Noocyada ugu badan ee toonta waxaa ku jira 10 xabo (ama qaybo) oo maqaarka cad leh. Sida caadiga ah, inta yar yar ee xabadku way ka sii xoogaystaan ​​dhadhanka! Toonta waa la cuni karaa iyadoo ceyrin ama la kariyey. Toonta ceeriin waxay siisaa dhadhan xoog leh, halka karinta ay leedahay dhadhan jaalle badan. Toontu si fudud ayey u gubtaa, markaa taxaddar markaad shiilayso ama aad shiineyso. Waxaa loo isticmaali karaa khudradda iyo suxuunta hilibka, maraqyada, faashashka, isku shiilow, jilaaga iyo fuudka, ama ku darto toon ah oo aan la xaaqin digsi lagu dubay hilib ama khudrad.
Cad cad oo fuuq bax ah ayaa leh muuqaal hufan, midab jaalle khafiif ah, dhadhan saafi ah, waa la cuni karaa ama loo isticmaali karaa cunto ahaan, qalabka kaabayaasha ah. Ilaa iyo inta lagu qooyay biyo diiran dib ayaa loo soo celin karaa xilli kasta, oo aad caan ugu ah suuqa.